साना तथा मझौला उद्योगी तथा व्यवसायीको हितमा काम गर्नेछु - khabarpatro
साना तथा मझौला उद्योगी तथा व्यवसायीको हितमा काम गर्नेछु
१९, फाल्गुण २०७७
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीको ६२ औं साधारणसभा तथा अधिवेशन यही २१ र २२ गते हँुदैछ । चुनाव नजिकिएसंगै उम्मेदवारहरु पनि चुनावी दौडमा छन् । चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि उम्मेदवारहरु अहिले आम उद्योगी व्यवसायीको घरदैलोमा पुगिरहेका छन् । संघको वाणिज्यतर्फको कार्यसमिति सदस्य पदको उम्मेदवार गौरवलाल श्रेष्ठ आसन्न निर्वाचनका लागि आफ्नो पक्षमा मत माग्दै हिंडेका छन् । चुनावी प्रचारप्रसारका विषयमा श्रेष्ठसंग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अशं :
तपाई चुनावी प्रचारप्रसारको काम कहाँसम्म पुग्यो ?
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघको यही २२ गते हुने अधिवेशनका लागि हामी चुनावी प्रचारप्रसारमा तीव्रताका साथ लागेका छौं । संघमा आगामी कार्यकालमा गर्नुपर्ने काम र एजेण्डा बोकेर म अहिले आम उद्योगी तथा व्यवसायीको घरदैलोमा भोट माग्दै हिंडेको छु । अहिलेसम्म थुप्रै उद्योगी व्यवसायीको पुगिसेको छु । यो क्रम जारी रहेको छ । निर्वाचनमा युवाहरुलाई मतदान गरी निर्वाचित गराउनुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएका छौं ।
तपाईले दुईपटक संघमा निर्वाचित भइसक्नु भो । दुई वर्षमा खास के के काम गर्नु भयो ?
हो, म दुई पटकसम्म संघको कार्यसमिति पदमा निर्वाचित भएको व्यक्ति हो । दुई कार्यकालमा हामीले थुप्रै सिर्जनशील काम गरेका छौं । खासमा त दुई कार्यकाल मेरा लागि सिकाईको कार्यकाल पनि बन्न पुग्यो । हामीले सिकेका कुरालाई आम उद्योगी व्यवसायीको हकहितमा लगाएका छौं । दुई कार्यकाल सिकाइमा गएकाले आगामी कार्यकालमा उद्योगी तथा व्यवसायीको हकहित र संरक्षणमा लाग्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्दछु ।
तपाई निर्वाचित भएको अवस्थामा के कस्ता काम गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?
म निर्वाचित भएको अवस्थामा संघको समग्र विकासका साथ साथै साना तथा मझौला खालका आम उद्योगी तथा व्यवसायीको हितमा काम गर्ने योजना रहेको छ । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघमा सानादेखि ठूला र शहरदेखि ग्रामिण क्षेत्रसम्मका व्यवसायी रहेका छन् । कतिपय ग्रामीण क्षेत्रका व्यवसायिहरुले कर, मास्केवारी लगायतका विषयमा जानकारी छैन । उहाँहरुलाई यी कुराहरुमा जानकारी दिलाउने, प्रशिक्षित गर्ने, उद्योगी व्यवसायीहरुको दक्षता विकास गर्ने मेरो योजना छ । व्यवसायीहको समस्यामा हरबखत मेरो उपस्थिति रहनेछ ।
म सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघमा वाणिज्यतर्फको सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएको छु । युवा तथा साना तथा मझौला खालका उद्योगी तथा व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गरेर जाँदैछु । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघमा मैले यस अघि गरेको योगदानको मुल्यांकन गर्दै आगामी एक कार्यकालका लागि निर्वाचित गराउनुहुनेछ भन्नेमा पूर्ण विश्वास लिएको छु ।
प्रकाशित मिति :फाल्गुण १९, २०७७ बुधवार - ११:०४:०१ बजे